Nagu saabsan - Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd waxay ku taalaa xarunta geometric aagga dhaqaalaha ee Yangtze River Delta., Gadaal webiga Yangtze, Taihu oo ku wajahan. Bari ilaa xarunta dhaqaalaha Shiinaha-Shanghai 150 kiiloomitir, dhanka galbeed ka caasimaddii hore-Nanjing 150 kiiloomitir, koonfur ilaa Wuxi Sunan International Airport 50 kiiloomitir. Jinghu iyo yanjiang laba waddo waawayn oo waaweyn oo ku kulma dhulka jiangyin, buundada weyn ee jiangyin Yangtze River waxay kala xiriirtaa waqooyiga iyo koonfurta wabiga Yangtze, waa xarun muhiim u ah isu socodka gaadiidka ee wabiga Yangtze. Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd waxay ku taalaa duleedka bari ee beerta warshadaha.
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd waa shirkad wadaag ah oo saamayn ku leh Sayniska, Warshadaha iyo Ganacsiga. Waxay leedahay in kabadan 300 oo shaqaale ah, oo ay kujiraan in kabadan 88 xirfadlayaal kulliyadeed iyo shaqaale farsamo. Hadda waxay xubin ka tahay shabakadda tamarta qorraxda ee Shiinaha. Shirkaddayadu waxay ka gudubtay ISO9001: Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada ee 2008, Shahaadada Nidaamka Maareynta Maareynta deegaanka ee ISO14001, Shahaadada Nidaamka Maareynta Caafimaadka iyo Maareynta Shaqada ee 18001. Badeecadu waxay ku lug leedahay batroolka, shidaalka, cuntada, maraakiibta, jidadka tareenka iyo khadka elektarooniga, iwm. Iminka waxaan haynaa in ka badan afartan kun oo mitir murabac ah oo ka shaqeeya aagga iyo in ka badan 80 qalab gaar ah oo wax soo saar ah, iibka sanadlaha ah ee 2018 waa 2.5 boqol milyan. Shirkadeenu waxay leedahay iib, suuq geyn, waaxda mashruuca, waaxda tikniyoolajiyadda, QC, qolka farsamada, waaxda wax soosaarka, sheybaarada, waaxda adeegga, iwm, oo bixiya nidaam hubin adag oo wax soo saar, tayada iibka iyo kadib iibinta alaabada ah.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay si weyn u maalgashatay qoysas xoog leh, oo loo qaabeeyey oo la soo saaray in ka badan toban suumanka xamuulka qaada, dharka caagga ah iyo khadka wax soo saarka xaashida. Hadda waxaan haynaa 3 baabur, 12 mashiin isku qas ah, mid 1830 afar-rolleel calender ah, mid 1730 saddex-rolleel calender ah, sideed 1400 mashiin daaweyn nooca durbaan ah, laba 1800 mashiin daaweyn nooca-durbaanka ah, laba mashiin oo daaweyn ah nooca 2000-da, mid 2200 Mashiinka daweynta nooca durbaanka ah, mid 3000 oo mashiin nooca daweynta nooca durbaanka ah, mid ah 4200 mashiinka daweynta nooca durbaanka ah, 4200 mashiinka nooca daweynta nooca durbaanku ugu weyn yahay. Intaa waxaa sii dheer, waxaan haynaa 8 nooc oo mashiinka saxaafadda ah, taasi waa 2400 * 10000, 4000 * 2000, 1500 * 3000, 1400 * 5700, 1400 * 4000, 1200 * 2700, 650 * 4000. 2016, waxaan sameynay mashiin aad u ballaaran, ballacuna waa 24 mitir.
Caycemay wuxuu diiradda saarayaa keenista alaab adag iyo sidoo kale alaabada jilicsan. Dad badan oo xirfadlayaal iyo karti leh ayaa ku hawlan waxna baray si loo hubiyo hawlgalka nidaamka tayada, maaraynta wax soo saarka iyo koritaanka awoodda wax soo saarka. Dhanka kale, si loo soo ururiyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee suuqyada iyo fariinta farsamada ee u janjeera koritaanka barwaaqo ee alaabooyinka cusub, Caycemay wuxuu si firfircoon u aasaasay xiriir iskaashi joogto ah oo deggan oo lala yeesho machadyada baaritaanka qaarkood. Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay laba iyo toban shati, warqad caag ah oo silikoon ah, heerarka warshadaha barkinta silikoon-kuleylka u adkaysta, ka qaybqaado dib u eegista heerarka qaran ee sagxadda caagga.
Tayada waa nolosha shirkadda, shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa xakameynta tayada wax soo saarka, waxaan leenahay shaqaale xirfadlayaal ah oo xoogga saaraya maareynta tayada, waxaan leenahay sheybaarro badeecado xirfad leh, qolka baaritaanka, sheybaarada. Soo saarista, waxaan ku dhegannahay wax soo saar la jaangooyay, dhaqan gelin adag oo ah heerarka qaranka, heerarka warshadaha iyo heerarka shirkadaha, si badeecadu ay u qancin karto shuruudaha macaamiisha.
Wax soo saarka shirkadda Caycemay waxay la xiriiraan wax soo saarka qaranka ee warshado kala duwan oo dalka oo dhan ah, wax soo saarka qaar ayaa loo dhoofiyaa dalal badan. Qiyaasta wax soo saarkeeda, tayada, qiimaha, gaarsiinta iyo macmiilka adeegga ayaa iska leh amaanta macmiilka waxayna ku riyaaqeen sumcad sare.
Wax soo saarka Caycemay wuxuu bartilmaameedsanayaa fasal sare, dheefshiidka iyo nuugista tikniyoolajiyadda horumarsan ee ajaanibta ah, waa masuuliyaddeeda inay tahay bedelida soo dejinta, kordhinta heerka gudaha. Maryaha dabka-celiya ee gawaarida tareenka waxaa la siiyaa shirkado shisheeye; warqad caag ah oo silikoon ah oo loogu talagalay laminator-ka qoraxda, muraayadaha, alwaaxa iyo kaararka qaadashada ayaa ku raaxeysta sumcad wanaagsan; Gogosha caaggu aad ayey u horumaraysaa.
Iyadoo la adeegsanayo fikradda ah in tayada ugu sareysa, adeegga ugu fiican, qiimaha tartanku ay sii socon doonto oo ay weyneyneyso shirkadda, Caycemay waxay sii wadaysaa inay dhisto dhaqanka iyo fikirka "ku saleysan aadanaha." Ficilkani wuxuu si weyn u dhiiri gelinayaa shaqaalaha inay hagaajiyaan masuuliyada iyo awooda cusbooneysiinta taasoo kor u qaadeysa firfircoonida iyo wadajirka shirkada.
Fikradda "daacad ah iyo kalsoonida ayaa soo jiidanaysa macaamiisha adduunka oo dhan", Caycemay oo qiiro leh ayaa kugu soo dhaweynaya inaad soo booqato warshadda adigoo rajeynaya inaad ku guuleysato kalsoonidaada, taageeradaada iyo bogaadinta sababtoo ah badeecooyinka iyo adeegga ugu fiican Caycemay.
Caycemay waxay aasaastay nidaam hubin tayo leh oo laga soo qaaday alaabta ceyriinka ah ee geleysa warshada ilaa adeegga wax soo saarka kadib-iibka iyo urur cusub oo soosaara wax soo saar leh injineernimo iyo shaqaale farsamo oo ah qeybta ugu weyn. Iyadoo lagu saleynayo xasilinta wax soo saarka badeecadaha jira iyo sii wanaajinta tayada wax soo saarka. Kordhi xoojinta isbeddelka tikniyoolajiyadda iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed, iyo iyadoo lala kaashanayo unugyada cilmi-baarista gudaha iyo jaamacadaha. Khubaro dibada ka kireystaan. Xalliyaan dhibaatooyinka farsamo ee habka wax soo saarka iyo soo saarida alaab cusub. Shirkadda Caycemay waxay diyaar u tahay inay macaamiisheeda siiso adeegyo la isku halleyn karo oo nidaamsan, ka jawaab oo tirtiraan cilladaha gudbinta (gudbiyaha) cilladaha suumanka iyo xulashada badeecadaha gudbinta habboon (gudbiyaha) si loo buuxiyo tilmaamaha hawlgalka isticmaalaha iyo shuruudaha dalabka. Qalabka ka baaraandegidda socodka ee loogu talagalay oo ay soo saartay shirkaddu wuxuu xaqiijin karaa isku-xirnaanta degdegga ah ee wax ku oolka ah ee suunka iyo isku-xidhka goobta ee suunka adeegsadaha. Yaree wakhtiga dhimista. hoos u dhig qiimaha waxsoosaarka. Isticmaaluhu wuu qeexi karaa cabbirka iyo qeexitaanka suunka, suunka aan dhammaadka lahayn ama suunka furan, ama xargaha wax lagu dhejiyo ee xabagta, tusaha hagaha ama goonnada suunka. Waan ognahay baahidaada guud ee suumanka, waxaan aaminsanahay in adeegeena uu ku caawin doono.